Motivation | Myo Min Thu
Posted April 4, 2016 Myo MinPosted in Education, Motivation
Hello Everyone, Today, We are working in computer fields. We must know some basic part of computer fields. I hope you […]
အလုပ်ခွင်တွင် စိတ်အခြေအနေနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတို့ကို တိုးမြှင့်နိုင်မည့် လွယ်ကူသော အပြောင်းအလဲ (၇) မျိုး
Posted December 10, 2015 December 10, 2015 Myo MinPosted in Motivation
ရုံးဆိုသည်မှာ အများအားဖြင့်တော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းနှင့် အကျိုးရှိစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဆိုးဝါးသော ၀န်းကျင်ဖြစ်နေပါက (သို့) အထူးပင်ဖိစီးမှုများသော ကာလ တစ်ခုအတွင်းကျရောက်နေပါက အလုပ်ဌာနတစ်ခုသည် ရန်လိုသော၊ စိတ်သောကများသော၊ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသော […]
Posted December 9, 2015 December 9, 2015 Myo MinPosted in Motivation
နာယကဂုဏ် (၆) ပါး နာယကဂုဏ် ခြောက်ပါးဆိုသည်ကတော့ လူအတော်များများသိပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤသည်လည်း အရေးကြီး သည့်အတွက်ကြောင့် ပုံသာဓကအနည်းငယ်ထုတ်နုတ်ပြီး တင်ပြလိုပါသည်။ ”ထကြွနိုးကြား၊ သနားသည်းခံ၊ ဝေဖန်ထောက်ရှု၊ ဤခြောက်ခု၊ ကြီးသူကျင့်ရာ တရားတည်း” ဆိုသည့် လင်္ကာလေးသည်လည်း […]
Make Every Morninga‪‎Good‬ ‪‎Morning‬!
သင်ရဲ့မနက်ခင်းတိုင်းကို ကောင်းမွန်းသော မနက်ခင်း ဖြစ်စေမည့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက် (၄) ဒီလ ဒီဇင်ဘာလ အတွက် ကျွန်တော် fun များအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ခင်းဖြစ်စေမည့် အချက် (၄) ချက်ကို မျှဝေးပေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ […]